October 31, 2019 kyaw kyaw Han News 0
ဒီကနထေု့တျပွနျလိုကျတဲ့ လိဂျဖလားကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ မဲခှဲမှုမှာ ထိပျသီး ၃ သငျးဖွဈတဲ့ လီဗာပူး၊ မနျစီးတီး နဲ့မနျယူတို့ အခငျြးခငျြးထိပျတိုကျတှခေဲ့ခွငျးမရှိလို့ မဲခှဲမှုဟာကွိုတငျအကှကျခထြားတာဖွဈနိုငျတယျဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျခံနရေကွောငျး သိရပါတယျ။
ဒီ ၃ သငျးဟာလိဂျဖလားကို စုစုပေါငျး ၁၇ ကွိမျရယူထားနိုငျကွတာဖွဈပွီး ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ဒီ ၃ သငျးထဲက နှဈသငျးထိပျတိုကျတှကွေ့လိမျ့မယျလို့ ကွားနပေရိသတျတှကေ ယူဆထားကွတာပါ။ ဒါပမေယျ့ မဲခှဲမှုအရ မနျယူက ကိုလျခကျြစတာနဲ့ အိမျကှငျး၊ မနျစီးတီးက အောကျစဖို့ဒျယူနိုကျတကျနဲ့အဝေးကှငျး၊ လီဗာပူးက အကျဈတှနျဗီလာနဲ့အဝေးကှငျး၊ လကျစတာက အဲဗာတနျနဲ့ အဝေးကှငျးတှဆေုံ့ခဲ့ကွတာပါ.
မဲခှဲမှုမှာ ဒေးဗဈဂြိမျးဈလညျးပါဝငျခဲ့ပွီး BBC Radio 2နဲ့ Twitter ကပါတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ပေးခဲ့ပမေယျ့ မဲခှဲမှုအပွီးမှာတော့ ပရိသတျတှကေ ထိပျသီးနှဈသငျးမဆုံတာကိုမေးခှနျးထုတျနကွေပွီး မဲခှဲမှုလုပျပှဲကွီးဖွဈနိုငျတယျလို့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ဝဖေနျနကွေပါတယျ။ ထိပျသီး ၃ သငျးအတူမတှကွေ့တဲ့အပွငျ မာဆေးဆိုကျဒျ ၂ သငျးဖွဈတဲ့ အဲဗာတနျနဲ့ လီဗာပူးတို့ဟာလညျး အခငျြးခငျြးရှောငျလှဲနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
တဈခြို့က မနျစီးတီးဟာအမွဲတမျး အသငျးလေးတှနေဲ့တှနေ့တေယျလို့ ရေးသားခဲ့သလို နောကျတဈဦးကလညျး မနျယူနဲ့ မနျစီးတီးတို့ တှတေဲ့ပွိုငျဘကျတှကေိုကွညျ့ရငျ ကွိုတငျအကှကျခထြားတာဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတဈဦးကဆိုရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကနစေတငျပွီး လိဂျဖလားနဲ့ အကျဖျအဖေလားတို့မှာ မနျစီးတီးက အရမျးလှယျတဲ့ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ဘဲ တှနေ့ရေတာကို ထောကျပွသှားပွီး ဒါမဖွဈသငျ့ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီးဟာပွီးခဲ့တဲ့ရာသီအကျဖျအဖေလားမှာ ရိုသာဟမျ၊ ဘနျလေ၊ နယူးပို့တျ၊ ဆှမျဆီး၊ ဘရိုကျတနျ တို့နဲ့သာတှခေဲ့ပွီး ဗိုလျစှဲခဲ့တာပါ။ လိဂျဖလားမှာဆိုရငျလညျး အောကျဈဖို့ဒျ(၂ ကွိမျ)၊ ဖူလျဟမျ၊ လကျစတာ၊ ဘာတနျ၊ ပရကျစတနျ၊ ဆောကျသမျတနျတို့နဲ့သာတှခေဲ့တာလို့ ဖျောပွပွီး လုံးဝကိုဟာသတဈခုဖွဈနတေယျလို့ ဖျောပွသှားပါတယျ။
လိဂ်ဖလား ကွာတားမဲခွဲမှုက ကြိုတင်အကွက်ချထားတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရ
ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ လိဂ်ဖလားကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့် မဲခွဲမှုမှာ ထိပ်သီး ၃ သင်းဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး၊ မန်စီးတီး နဲ့မန်ယူတို့ အချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ မဲခွဲမှုဟာကြိုတင်အကွက်ချထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ခံနေရကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီ ၃ သင်းဟာလိဂ်ဖလားကို စုစုပေါင်း ၁၇ ကြိမ်ရယူထားနိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဒီ ၃ သင်းထဲက နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ ကြားနေပရိသတ်တွေက ယူဆထားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် မဲခွဲမှုအရ မန်ယူက ကိုလ်ချက်စတာနဲ့ အိမ်ကွင်း၊ မန်စီးတီးက အောက်စဖို့ဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့အဝေးကွင်း၊ လီဗာပူးက အက်စ်တွန်ဗီလာနဲ့အဝေးကွင်း၊ လက်စတာက အဲဗာတန်နဲ့ အဝေးကွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ.
မဲခွဲမှုမှာ ဒေးဗစ်ဂျိမ်းစ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး BBC Radio 2နဲ့ Twitter ကပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် မဲခွဲမှုအပြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေက ထိပ်သီးနှစ်သင်းမဆုံတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပြီး မဲခွဲမှုလုပ်ပွဲကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ထိပ်သီး ၃ သင်းအတူမတွေ့ကြတဲ့အပြင် မာဆေးဆိုက်ဒ် ၂ သင်းဖြစ်တဲ့ အဲဗာတန်နဲ့ လီဗာပူးတို့ဟာလည်း အချင်းချင်းရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ချို့က မန်စီးတီးဟာအမြဲတမ်း အသင်းလေးတွေနဲ့တွေ့နေတယ်လို့ ရေးသားခဲ့သလို နောက်တစ်ဦးကလည်း မန်ယူနဲ့ မန်စီးတီးတို့ တွေ့တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုကြည့်ရင် ကြိုတင်အကွက်ချထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တစ်ဦးကဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကနေစတင်ပြီး လိဂ်ဖလားနဲ့ အက်ဖ်အေဖလားတို့မှာ မန်စီးတီးက အရမ်းလွယ်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ဘဲ တွေ့နေရတာကို ထောက်ပြသွားပြီး ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအက်ဖ်အေဖလားမှာ ရိုသာဟမ်၊ ဘန်လေ၊ နယူးပို့တ်၊ ဆွမ်ဆီး၊ ဘရိုက်တန် တို့နဲ့သာတွေ့ခဲ့ပြီး ဗိုလ်စွဲခဲ့တာပါ။ လိဂ်ဖလားမှာဆိုရင်လည်း အောက်စ်ဖို့ဒ်(၂ ကြိမ်)၊ ဖူလ်ဟမ်၊ လက်စတာ၊ ဘာတန်၊ ပရက်စတန်၊ ဆောက်သမ်တန်တို့နဲ့သာတွေ့ခဲ့တာလို့ ဖော်ပြပြီး လုံးဝကိုဟာသတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ ဖော်ပြသွားပါတယ်။